Xukumada, Somalia oo Rooble ku cadaadineysa inuu xilka ka qaado Xijaar – Yaa lagu beddeli rabaa? | Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Xukumada, Somalia oo Rooble ku cadaadineysa inuu xilka ka qaado Xijaar –...
Xukumada, Somalia oo Rooble ku cadaadineysa inuu xilka ka qaado Xijaar – Yaa lagu beddeli rabaa?
Xog ay heshay wardeeqnews ayaa sheegeysa in Madaxtooyada Soomaaliya ay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ku cadaadineyso in xilka laga qaado taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Jeneral Cabdi Xasan Maxamed Xijaar.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa wardeeq news u sheegay in Villa Somalia ay damacsan tahay in taliyaha booliska Soomaaliya laga dhigo Janaraal Asad Diyaano si uu qorshaha Farmaajo uga hergeliyo degaanada Puntland.
Previous articleCiidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa xalay howlgal culus waxa ay ka sameeyeen xaafado ka titsan magaalada Muqdisho
Next articleWasiir; Khadiijo Maxamed Diiriye oo gaari iyo lacag u dhiibtay Barkhad+